भुईँचालोले थलीएको नगर तङ्ग्रीएर चलायमान भएको छः मेयर तामाङ (भिडियो सहित) – Mayorkhabar.com
भुईँचालोले थलीएको नगर तङ्ग्रीएर चलायमान भएको छः मेयर तामाङ (भिडियो सहित)
Mayor Khabar १५ पुष २०७६ २०:०७	No Comments अमान सिंह तामाङचौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकासिन्धुपाल्चोक
२०७२ को विनासकारी भुकम्पले तहसनहस बनेको सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकामा स्थानीय सरकारको आधा समय बितीसक्दा पिडीत स्थानीयको जनजिवनमा के परिवर्तन आयो ? कस्ता खालका चुनौती रहे र आगामी कार्ययोजना के–के छन् ? यी विषयमा मध्यावधि समिक्षा गर्ने क्रममा सिन्धुपाल्चोक चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाका मेयर अमान सिंह तामाङसँग सहकर्मी शिव अधिकारीले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
मेयरज्यू, तपाईँ जतीबेला चुनाव लड्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यतिबेला तपाईँले गर्नुभएको प्रतिबद्धता आज कहाँ पुग्यो ?
२०७२ साल बैशाख १२ गते गएको महाभुकम्पले सारा सिन्धुपाल्चोक जिल्ला ध्वस्त भएको थियो । त्यो पुननिर्माण सम्पन्न गर्छु भनेर मैले पहिलो प्रतिबद्धता जनाएको थिएँ । विभिन्न ठाउँमा गाउँ–गाउँमा काठका पोलहरु लथालिङ्ग भएर भाँचिएका थिए, जसको कारणले धेरै मानविय क्षती पुग्ने सम्भावना पनि थियो । यसरी गाउँमा डुल्दा मैले काठका पोलहरु हटाउदै फलामे पोल राख्ने अभियान चलाएको थिएँ । त्यस्तै चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको प्रत्येक वडा कार्यालयसम्म कालोपत्रे सडक पुर्याउने अर्को अठोट थियो । त्यसपछाडी चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको कार्यालय नभएको कारणले कार्यालय भवन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता थियो । अर्को कृषि, भेटनरी र ८० वटा विद्यालय भुकम्पले तहसनहस भएको थियो यो सबै निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने अभियानमा जुटेको थिएँ । भुकम्पले गर्दा कृषकहरु आफ्नो कृषि पेशा छोडेर बानी बिग्रीएको अवस्था थियो । तिं कृषकहरुलाई फेरी कृषि पेशामा फर्काएर आत्मनिर्भर बनाउछु भन्ने अठोटका साथ म अगाडि बढेको थिएँ र त्यो काम मैले अहिले तदारुकताका साथ अगाडि बढाउँदै लगेको छु ।
भुँईचालोले सबैभन्दा क्षती पुर्याएको तपाईँको नगरपालिका हो । चौतारा त सबै ध्वस्त नै थियो । आज चौतारा सफा छ ? काहि घर बनाउन नपाएर बस्नुपरेको अवस्था त छैन ? तपाईँको नगरपालिका भित्र कतै पालमुनि त छैनन् जनता ?
छैन । जनतालाई पाल, टहरोबाट घरमा लग्नको लागि नम्बर एकमा मैले घर–घरमा प्रत्येक टोल–टोलमा त्यो गिट्टी, बालुवा, सिमेन्ट र रड पुर्याउनका लागि मैले प्रत्येक टोलको चोक–चोकमा बाटो पुर्याउने काम गरेँ नम्बर एकमा । सरकारी कार्यालयको कागजी प्रकृया मिलाउन धेरै झन्झट भएको कारणले निर्माण गर्नु भनेर घरको नक्सा पासमा मैले छुट दिएँ । अहिले सम्म आउँदा खेरि ९४ प्रतिशत घरहरु मेरो नगरपालिकामा निर्माण भइसकेको छ ।
दोस्रो चुनावी प्रतिबद्धतामा काठको पोल विस्थापित गर्ने भन्नु भएको थियो हैन । त्यो अहिले के छ ?
त्यसको प्रगति पनि सन्तोसजनक छ । किनभने साँढे २ वर्षको कार्यकालमा मैले ९५ प्रतिशत काठको पोल मुक्त गरिसकेँ ।
अर्को, मेयर साहब प्रत्येक वडामुकामसम्म पक्की बाटो बनाउने जुन तपाईँको प्रतिबद्धता थियो । त्यो प्रतिबद्धता कहाँ पुग्यो ?
चौतारा बजार लथालिङ्ग थियो, भुकम्पले भत्काएको घर सबै त्यही बाटोमा थुप्रीएका कारण सडक तहसनहस थियो, सबै पुरानो पिच भत्कीएको थियो । अहिलेको नयाँ बषपार्क देखि चौताराको टुडिँखेलसम्म सबै पिच भइसकेको छ । भोली आउँदा दिनहरुमा वडा कार्यालयसम्म पुग्ला या नपुग्ला तर सकेसम्म म पुर्याउने अभियानमा छु । मलाई लाग्छ अरु वडामा पुग्छ तर यो ३ नम्बर र २ नम्बरमा चाँही मलाई शंका लाग्या छ । तर सकेसम्म त्यहाँसम्म पनि पुर्याउने भन्ने अठोटका साथ म अगाडि बढेको छु ।
विद्यालय पुननिर्माणको प्रकृया चाँही कहाँ पुगेको छ ?
विद्यालयको पुननिर्माणका सन्दर्भमा ८० वटा विद्यालयमा ७८ वटा सामुदायिक विद्यालय नै छन् । ५८० वटा कोठाहरु नै छन् । ५८० वटा कोठाका लागि मैले नगरपालिकाको आग्रहमा एडीबी, वल्र्ड भिजन जस्ता ठूला संस्थालाई मेरो नगरपालिकाको यत्रो विद्यालय बनाउने क्षमता छैन । लौन हजुर तपाईँले सहयोग गर्नुपर्यो भन्ने आग्रहमा चाँही अहिले प्रत्येक विद्यालयको पुननिर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । अहिले हस्तान्तरण गर्ने कार्यहरु जारी छ ।
अहिले हस्तान्तरण गर्न भ्याइ–नभ्याई छ हैन त मेयरसाहबको ?
भ्याइ नभ्याई छ । किनभने मैले पहिला पनि बोलेको थिएँ । तपाईँहरुले मलाई भोट दिएर मेयर भइसकेपछि मलाई ठूलो मान्छे बनाइदियो भनेर म घमण्ड गर्ने छैन । म शाषक हो, मलाई जनताले ठूलो मान्छे बनाइदियो, मेयर बनाइदियो भन्यो भने त्यो बोलेको कुरा पुर्याउन सक्दैन । तर म नोकर हो नोकर सम्झेर काम गरिसकेपछि त्यो पुर्याउन सकिन्छ ।
तपाईँ जनताको नोकर हो की सेवक हो मेयरज्यू ?
नोकर र सेवक एउटै पनि हो । किनकी अब सेवक पनि हो । तर सेवकले मात्र पुग्दैन । नोकर भएपछि मालिकलाई खुशी पार्नको लागि आफ्नो दायित्व पुरा गरिन्छ । मेरो जनता मालिक हुन् म नोकर हो ।
गाउँमा युवाहरु बसेनन् सबै खाडी मुलुकतर्फ जाने अवस्था बन्यो । अझ काठमाडौँबाट नजिकै भएको हुनाले पनि त्यहाँबाट काठमाडौं आउने र यहिँ बस्ने नफर्कनेहरुको संख्या धेरै भयो । तपाईँको घोषणापत्रमै पनि थियो । गाउँमा चाँही काम गरेर खाने अवस्था बनाउँछु भन्नुभएको थियो । जसका लागि तपाईँले कृषिमा जोड दिन्छु, त्यहाँ भेटनरी राख्छु भन्नुभएको थियो नी । त्यो प्रयत्न के भएको छ ?
कृषिको लागि मैले जोड दिएको छ । कृषि भनेको विकासको मेरुदण्ड रहेछ । अहिले प्रत्येक घर–घरमा हाते ट्रयाक्टर वितरण गर्ने कामहरु मैले गरेको छु । धान, कोदो कुट्ने मेसिनहरु, मकै छोडाउने मेसिनहरु जनतालाई उपलब्ध गराएको छु । प्रत्येक वडा–वडामा एउटा–एउटा तरकारी पकेट क्षेत्र घोषणा गरेको छु । पकेट क्षेत्र घोषणा गरेको ठाउँमा त्यसको मल बीउ र औषधीका लागि नगरले २–३ लाख अनुदान दिने काम गरेको छ । त्यसका साथै तरकारी संकलन केन्द्र बनाउन मैले १५ लाख रुपैँया छुट्याएको छु । भेटनरी सम्बन्धमा हिजो एउटा ३० हजार रुपैयाँ भैँसी अनुदान आएको थियो । मैले १७६ वटा भैँसी नै किनेर दिएँ । दिइसकेपछि त्यती उपलब्धीमुलक देखेन मैले । कृषकले आफैलाई ठग्ने कामहरु गरे । अनुदान लिएको भैँसी बेच्दीने, अब दुध अनुदान दिएपछि त दुध बेच्न मिलेन । त्यसैले अहिले दुध अनुदान दिने निती ल्याएको छु ।
५ वर्ष बितीसकेपछि फर्केर हेर्दाखेरि यो चौतारा साँगाचोकगढि नगरपालिकामा मेयर अमान सिंह तामाङ हुनुहुन्थ्यो र यो भयो भन्ने खालको तपाइको नगरपालिका भित्र के हुनसक्छ ?
देखिने काम मुख्य १ नम्बरमा अब मैले अघि नै भनेँ प्रत्येक घर–घरमा बाटो पुग्ने काम त्यो भैगो । नम्बर २ काठको पोल मुक्त गरेर मेरो नगरपालिका भित्रमा केबल लाइन कालो तार हुन्छ । ३ मा नगरपालिकाको कार्यलय भवन निर्माण सम्पन्न हुन्छ । विद्यालयमा पानी, शौचालय सहितको भवन निर्माण भएको त्यो भैगो । अर्को यो चौतारा अस्पताल माथि पानी ट्याङकी छ त्यसमा स्वयम्भुको जस्तो सिँढी बनाउने, माथि डाँडामा ५० फिटको एउटा बुद्धको मुर्ति बनाउने । कृषी अनुदान यो त आत्मनिर्भर बन्ने काम हो देख्ने त हैन । सकेसम्म यूवाहरुलाई विदेश जानबाट रोक्ने ।
Previous Previous post: नगरपालिकाबाट पाडी उपहार पाएर किसान दंग
Next Next post: एउटा गज्जबको योजना– ‘गरे के हुँदैन’
हेटौंडाका कोरोना संक्रमितलाई रिद्धि सिद्धिको सहयोग १५ पुष २०७६ २०:०७
नगरपालिकाको काम अब ‘शहरको आवाजमा’ १५ पुष २०७६ २०:०७
कोरोना संक्रमित मेयर सरावगी निको भए, पछिल्लो जाँच नेगेटिभ १५ पुष २०७६ २०:०७
विभेदमा पिल्सिएको मधेशको विकासमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच एकमत आवश्यक : प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लाम्गादे (भिडियो सहित) १५ पुष २०७६ २०:०७
सैनामैनाका १ सय ८८ जनाले पाए लालपुर्जा १५ पुष २०७६ २०:०७